Isahluko 34 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UNkulunkulu uSomandla unamandla onke, uzuza konke futhi unguNkulunkulu wangempela ophelele! Akaphethe izinkanyezi eziyisikhombisa, aphathe oMoya abayisikhombisa, abe namehlo ayisikhombisa, avule izimpawu eziyisikhombisa futhi avule umqulu kuphela, kodwa ngaphezu kwalokho uphatha izinhlupho eziyisikhombisa nezitsha eziyisikhombisa futhi uvula imidumo eyisikhombisa; kudala ushaye amacilongo ayisikhombisa! Zonke izinto ezidalwe futhi zapheleliswa Nguye kufanele zimdumise, zimnike inkazimulo futhi ziphakamise isihlalo Sakhe sobukhosi. O, Nkulunkulu uSomandla! Uyikho konke, ufeze konke, futhi Ngawe konke kuphelele, konke kuyakhanya, konke kukhululiwe, konke kukhululekile, konke kuqinile futhi kunamandla! Akukho okucashile noma okufihliwe. Ngaphezu kwalokho, wahlulela inqwaba yezitha Zakho, ukhombisa ubukhosi Bakho, ukhombisa umlilo Wakho oqothulayo, ukhombisa ulaka Lwakho, futhi ngaphezu kwalokho ukhombisa inkazimulo Yakho engakaze ibonakale, engapheli, futhi engenamkhawulo! Bonke abantu kufanele bavuke futhi kufanele bahalalise futhi bahlabelele ngaphandle kokuzibamba, bedumisa usomandla, weqiniso lonke, wokuphila konke, ophanayo, okhazimulayo noNkulunkulu weqiniso osukela phakade aye phakade. Isihlalo Sakhe sobukhosi kufanele siphakanyiswe njalo, igama Lakhe elingcwele lidunyiswe futhi likhazimuliswe. Lokhu kuyintando kaNkulunkulu yaphakade futhi kuyizibusiso ezingenamkhawulo azembulela futhi azinike thina! Ngubani phakathi kwethu ongakutholi njengefa? Ukuze athole izibusiso zikaNkulunkulu, umuntu kufanele aphakamise igama likaNkulunkulu elingcwele futhi azokhonza ngokuzungeza isihlalo sobukhosi. Bonke labo abaya phambi Kwakhe ngezinye izizathu nezinye izinhloso bayoncibilikiswa ngumlilo Wakhe oqothulayo. Namuhla wusuku lapho izitha Zakhe zizokwahlulelwa khona, futhi zizobhubha ngalolu suku. Ngaphezu kwalokho wusuku uNkulunkulu uSomandla Wami ozokwambulwa ngalo futhi wusuku lapho ezozuza khona inkazimulo nokuhlonipheka. O, bantu nonke! Sukumani masinyane ukuze nidumise futhi namukele uNkulunkulu uSomandla osinika phakade naphakade umusa wothando, insindiso, osinika izibusiso, owenza amadodana Akhe aphelele futhi afeze umbuso Wakhe ngempumelelo! Lokhu kuyisenzo sikaNkulunkulu esimangalisayo! Lokhu kuyisimiselo nelungiselelo likaNkulunkulu laphakade, lokuthi Yena Ngokwakhe uzela ukusisindisa, ukusiphelelisa nokusingenisa enkazimulweni.
Bonke labo abangasukumi bafakaze bangabanduleli bezimpumputhe, amakhosi okungazi futhi bayoba ngabangazi kuze kube phakade, iziwula zaphakade nabafile abayizimpumputhe zaphakade. Ngakho imimoya yethu kufanele ivuke! Bonke abantu kufanele basukume! Halalisani, dumisani futhi nibabaze ningaqedi iNkosi yenkazimulo, uYise womusa, iNdodana yokuhlenga, imimoya eyisikhombisa enenala, noNkulunkulu uSomandla oletha umlilo wobukhosi oqothulayo nokwahlulela okulungileyo, owanele konke, onenala, onamandla onke, futho ophelele. Isihlalo Sakhe sobukhosi siyophakanyiswa kuze kube phakade! Bonke abantu kufanele babone ukuthi lokhu kuwukuhlakanipha kukaNkulunkulu, kuyindlela Yakhe emangalisayo yokusindisa, futhi kungukufezwa kwentando Yakhe ekhazimulayo. Uma singasukumi sifakaze, uma umzuzu usudlulile khona-ke akukho kubuyela emuva. Ukuthi sizuza izibusiso noma ishwa kunqunywa kulesi sigaba samanje sohambo lwethu, ngalokho esikwenzayo, esikucabangayo nesikuphilayo ngalesi sikhathi. Ngakho kufanele nenze kanjani? Fakazani futhi niphakamise uNkulunkulu kuze kube phakade, phakamisani uKristu onamandla onke—uNkulunkulu wangempela, waphakade, ongafani nalutho!
Kusuka manje kuya phambili kufanele ubone ngokusobala ukuthi bonke labo abangafakazi ngoNkulunkulu, abangafakazi ngoNkulunkulu ongafani nalutho, ongowempela, labo abanokungabaza Ngaye, bonke bayagula, bafile futhi yilabo abaphikisa uNkulunkulu! Amazwi kaNkulunkulu avele afakazelekile kusuka endulo: Bonke labo abangahlangani Nami bayahlakazeka, futhi labo abangekho Nami baphikisana Nami; lokhu kuyiqiniso elingaguquleki eliqoshwe etsheni! Labo abangafakazeli uNkulunkulu bayizinceku zikaSathane. Laba bantu beze ukuzophazamisa nokukhohlisa abantwana bakaNkulunkulu, ukuphazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu, futhi kufanele babulawe! Noma ngubani obakhombisa izinhloso ezinhle ufuna ukubhujiswa kwabo. Kufanele uzwe futhi ukholwe yinkulumo yoMoya kaNkulunkulu, uhambe ngendlela yoMoya kaNkulunkulu futhi uphile amazwi oMoya kaNkulunkulu, futhi ngaphezu kwalokho uphakamise isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu onamandla onke kuze kube phakade!
UNkulunkulu uSomandla nguNkulunkulu woMoya abayisikhombisa! Futhi unguNkulunkulu [a] wamehlo ayisikhombisa, uvula izimpawu eziyisikhombisa, futhi umqulu uvulwa Nguye! Useshaye amacilongo ayisikhombisa, futhi izitsha eziyisikhombisa nezinhlupho eziyisikhombisa zisesandleni Sakhe, ukuze akudedele ngokuthanda Kwakhe. O, imidumo eyisikhombisa ebilokhu ivaliwe! Isikhathi sokuyivula sesifikile! Lowo oyovula ukuduma okuyisikhombisa usevele ebonakele phambi kwamehlo ethu!
Nkulunkulu uSomandla! Ngawe konke kukhululiwe futhi kukhululekile, akukho bunzima, futhi konke kugeleza kahle! Akukho okulokotha kukuvimbe noma kukuphazamise, konke kuthobela Wena. Noma yikuphi okungathobi konke kuyafa!
Nkulunkulu uSomandla, uNkulunkulu onamehlo ayisikhombisa! Konke kucace ngokuphelele, konke kugqamile futhi kwambuliwe, konke kwambulwe futhi kwabekwa obala. Kuye konke kucace kakhulu, futhi uNkulunkulu akanjena kuphela, kodwa ngokunjalo namadodana Akhe nawo anje. Akukho muntu, futhi akukho nto, nodaba okungafihlakala phambi Kwakhe namadodana Akhe!
Izinkanyezi eziyisikhombisa zikaNkulunkulu uSomandla zigqamile! Ibandla lipheleliswe Nguye, umisa izithunywa zebandla Lakhe futhi lonke ibandla lingaphakathi kokondliwa Nguye. Uvula zonke izimpawu eziyisikhombisa, futhi Yena Ngokwakhe ufikisa uhlelo Lwakhe lokuphatha nentando Yakhe ekupheleleni. Umqulu uwulimi olufihlakele lokomoya lokuphatha Kwakhe futhi uwuvulile futhi wawembula!
Bonke abantu kufanele bezwe amacilongo Akhe ayisikhombisa ankenenezayo. Ngaye konke kuyaziwa, akuphinde kufihlwe noma kube nosizi. Konke kuyambulwa futhi konke kunqobile!
Amacilongo ayisikhombisa kaNkulunkulu uSomandla avuliwe, amacilongo akhazimulayo futhi anqobileyo! Futhi angamacilongo ahlulela izitha Zakhe! Phakathi kokunqoba Kwakhe, uphondo Lwakhe luyaphakanyiswa! Ubusa phezu kwalo lonke izulu nomhlaba!
Ulungise izitsha eziyisikhombisa zezinhlupheko futhi zithelwa ngokutshekiswa okuphelele phezu kwezitha Zakhe kuze kube semkhawulweni wonke, futhi ziyobhujiswa emalangabini emililo Yakhe eqothulayo. UNkulunkulu uSomandla ukhombisa amandla egunya Lakhe futhi izitha Zakhe zonke ziyabhubha. Imidumo eyisikhombisa yokugcina ngeke isavalwa phambi kukaNkulunkulu uSomandla, ivulwe yonke! Ivulwe yonke! Ubulala izitha Zakhe ngemidumo eyisikhombisa, ezinzisa umhlaba, ewenza ukuthi umsebenzele, ungaphindi uchithwe!
Nkulunkulu uSomandla olungileyo! Siyakudumisa kuze kube phakade! Ufanelwe ukudunyiswa okungapheli, ukutuswa nokuphakanyiswa okungapheli! Imidumo Yakho eyisikhombisa akuyona nje eyokwahlulela Kwakho, kodwa ngokwengeziwe eyenkazimulo nethonya Lakho, ukugcwalisa zonke izinto!
Bonke abantu bayagubha phambi kwesihlalo sobukhosi, betusa futhi ngentokozo bephakamisa uNkulunkulu uKristu onamandla onke! Amaphimbo abo ankeneneza njengomdumo! Zonke izinto ngokungangabazeki zikhona ngenxa Yakhe, futhi ziphakama ngenxa Yakhe. Ngubani ongalokotha anganikezi yonke inkazimulo, ukuhlonipheka, igunya, ukuhlakanipha, ubungcwele, ukunqoba nezambulo ngokuphelele Kuye? Lokhu kungukufezwa kwentando Yakhe futhi kungukuphethwa kokugcina kokwakhiwa kokuphatha Kwakhe!
a. Umbhalo wokuqala ushiya “uNkulunkulu wa-.”
Umsebenzi wezinsuku zokugcina ukwahlukanisa bonke ngokohlobo lwabo, ukuze kuphothulwe uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha, ngoba isikhathi sesisondele …
Nahlukaniswa nodaka futhi nakunoma yisiphi isilinganiso, nakhethwa enhleseni, ningcolile futhi nizondwa uNkulunkulu. Nina beningabakaSathane futhi nan…